Sheekadii diinka dhaanka loo diray.W/Q Eng Abdulaahi Mohamed ( Jigato) | RBC Radio
Sheekadii diinka dhaanka loo diray.W/Q Eng Abdulaahi Mohamed ( Jigato)
Sheekadii diinka dhaanka loo diray.
Eng Abdulaahi Mohamed Jaamac ( Jigato)
Beri ayaa Diin loo diray Dhaan, isagoo ka doonaya biyaha meel aad u fog oo looga soo noqdo malin iyo habeen dhax, in mudo ah markii uu maqnaa oo lagaaray waqtigii looga soo noqon jiray ceelka, ayaa waxaa la maqlay sharqan ah (Jaqaf,Jaqaf). Markas ayaa la is yiri alaylahee diinkii baa soo noqday, markaasu ku jawaabay war waa anigii oo sii socda.
Hadaba aan tulucda sheekada hoos ugu soo dhaadhaco.
Amison= Diinkii dhanka loo diray.
Sanadka markuu ahaa 19/January/2007 waxa ay ahayd markii ugu horaysay ee la Hindisay howlgalkii midowga afrika oo Marka Magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan Amisom. 21kii February isla sanadkaas 2007kii ayaa Golaha Amanka Qaramada Midoobay uu fasaxay Midowga Afrika Inay Ciidamo nabad ilaalin ah geeyaan Soomaliya si loo taageero dawladii xiligaas ka talinaysay Dalka ee (TFG) ahayd ee uu horkacayey Ex-Madaxwayne Cabdulaahi Yusuf Ahmed (AUN), iyadoo horay gacan taageero uga heli jirtay ciidamada ethopia oo iyagana wadanka soo galay dabayaaqadii sanadkii 2006da, xiligaas oo ay la dagaalamayeen Maxkamadihii Islaamiga. Labo bil ka bacdi ayaa uu bilaabmay howlgalkaas in ciidamo loo daad gureeyo magalada caasimada ah ee Muqdisho.
Muhiimada ciidamada Amisom ee dalka loo keenay ayaa ahayd in ay taageeraan xoojiyaana ciidama dowlada somaliya, gacana ka gaystaan sidii soomaaliya dhabaha nabada loogu soo celin lahaa. Lkn taas waxay noqotay inaysan hirgalin in badan oo ka mid hadafkooda, sidoo kale ciidamada Amisom waxay in badan tacadiyo fara badan kula kaceen shacabka iyo madaxda dawlada. Sidoo kale Amisom waxay qayb ka ahayd hawlgalo badan oo ciidanka dowlada soomaliya ku qabsadeen magaalooyin dhawr ah. Ciidanka Amisom ayaa iminka u eg kuwo Faaido doon ah iyadoo la ogsoon yahay mushaarka askarika Cidanka Amisom ahi gaarayao 1000$( Kun Doolar) oo joogta ah, halka Cidaanka qaranka somaaliya uu yahay ugu badnaan 200$ ( labo boqol oo doolar) oo aan joogto ahayn, lagana yaabo inuu helo lixdii bilood mar. Hadaba waxaa is waydiin mudan imisa askari ayay kaafisaa mushaarka ciidanka Amisom ay qaatan bil walba ? Hadaan ka jawaabo waxay kaafin kartaa 115,000 oo askarta soomaliya ah halka ciidanka Amisom lagu qiyaaso inay kor u dhaafayaan ilaa 22,000 oo askari. Sidoo kale ciidanka Amisom waxaa u dheer askarigii ka dhinta in dadkiisa la siinayo magdhow ah lacag fara badan halka askariga soomaliyeed uusan lahayn wax xuquuq ah oo la mid ah tan ciidanka Amisom.
Tirada ciidamada Amisom tiro kobkii sanadkii 2016 la sameeyay waxa ay gaarayeen 22,126 askari oo iskugu jira Milateri Iyo Boolis
Tirada mileteriga iyo wadamada ay ka socdaa:-
5,432 askari oo ka socda Burundi
1000 askari oo ka socda Djibouti
3664 askari oo ka socda Kenya
850 askari oo sierra Leone u dhashay
4395 askari oo rasmi ah una dhashay Ethopia
6223 askari oo Uganda u dhashay
Hadaan intaas uga gudbo Ciidamka Amisom iyo Ahdaaftii dalka loo keenay
Waxaa ifafaalo qurxoon kasoo baxayaa balanqadkii uu sameeyay Madaxwaynaha Qaranka Somaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, ee ahaa in uu dhisayo ciidanka xooga soomaliya sidoo kale uu balan qaaday in dib u eegid lagu samaynaayo halwgalka ciidamka Amisom.
Waxaan marag ma doonta ah in hawlgalka Amisom u ekaaday Dinkii Dhaanka loo diray.
⦁ Soomaliya ma u bahan tahay in ciidanka Amisom sii joogaan dalka?
⦁ Ciidamada soomaaliya ma ka dhabaynkaraan xasilinta dalka?
⦁ Soomaaliya diyaar ma u tahay in ay runta u sheegaan midawga Afrika iyo Qaramada midoobay?
⦁ Nabada soomaaliya ma Amisom bay ka go’daa mise Ciidanka soomaaliya?
Waxaan madaxda soomaaliyeed usoo jeedinayaa inay taakulayn iyo tageero joogta siiyaan ciidanka soomaaliyeed ee har iyo habeen u taagan cidlada, sidii rajada shacabkooda u rumayn lahaayen. Si la mid ah shacabka waxaan usoo jeedinayaa inay masuuliyad iska saaraan daryeelka iyo la shaqaynta ciidamka iyo laamaha Amniga.